4 AS ikhuthazwe ukwakha kwakhona ukomelela kwe-Indonesia kunye nokukhuphisana emva kobhubhani we-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » 4 AS ikhuthazwe ukwakha kwakhona ukomelela kwe-Indonesia kunye nokukhuphisana emva kobhubhani we-COVID-19
UMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho lwezoQoqosho lwase-Indonesia unxibelelana nokuphucula ukomelela kunye nokukhuphisana ukukhuthaza imvuselelo yamashishini emva kokubethwa ngubhubhani we-COVID-19.
Ukufezekisa injongo, i-Ofisi yoMphathiswa yenze iinkqubo ezigxininise kwimigaqo "ye-4 AS": oko kukuthi i-Kerja KerAS (ukusebenza nzima), i-CerdAS (i-smart work), i-TuntAS (ngokucokisekileyo), kunye ne-IkhlaS (enyanisekileyo). Umphathiswa unethemba lokuba i-4 AS iya kuba yimilinganiselo ephambili yokhenketho kunye namashishini okudala ukuze akhe amashishini abo kwaye avuselele uqoqosho lwelizwe.
Le migaqo "4 AS" yasekwa kulandela iimpembelelo zobhubhani we-COVID-19 kukhenketho kunye neshishini loyilo kwilizwe liphela, apho ngaphambi kokuba izithintelo zentlalo nezoqoqosho zilawule ukulinganisa ukusasazeka kwale ntsholongwane, yaba nezigidi ezili-16.11 zabakhenkethi abafikayo ngo-2019 kwaye yehla ngama-75. I-% ukuya kwi-4.02 yezigidi ngo-2020.
Eli nani libe sisibetho esinzima kuqoqosho lwezokhenketho olubonelele nge-5.7% yesambuku semveliso yelizwe lwaze lwabonelela ngemisebenzi ezizigidi ezili-12.6 ngowama-2019.
“Kufuneka sihambe ngokukhawuleza ukuze sifumane ulwazi nezakhono ezifanelekileyo kumashishini. Yiyo loo nto bonke abachaphazelekayo kufuneka bamanyane ukuvula lonke ukhenketho kunye neshishini loyilo elinokubakho ukudala amathuba emisebenzi kunye nokuqinisekisa ukuba singalwakha ngokutsha uqoqosho lwethu ngokhenketho olusemgangathweni noluzinzileyo,” utshilo uSandiaga Uno, uMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho loBuchule.
Urhulumente ebesebenza kweli phulo ngokusasaza inkuthazo ebuyisela ukhenketho kumashishini oyilo. Ukusukela kwisiqingatha sokuqala sika-2020, ishishini lokhenketho e-Indonesia liye lalahlekelwa yi-85 yezigidi zezigidi zeerupiya zase-Indonesia kwingeniso yokhenketho, kunye nehotele kunye nevenkile yokutyela kuqikelelwa ilahleko malunga ne-70 yetriliyoni ye-rupiah yase-Indonesia.
Ubhubhani we-COVID-19 uwachaphazele kakhulu amanye amacandelo oyilo ngokunjalo. Ke ngoko, iCandelo loMphathiswa likwasebenza kwiinkqubo ezahlukeneyo zemfundo ukukhuthaza ushishino kwilizwe liphela.
Enye yeenkqubo linyathelo labafundi bezikolo zokubhoda zamaSilamsi ezibizwa ngokuba yi "Santri Digitalpreneur Indonesia" egxile kuqeqesho kunye nokucebisa "santri" (abafundi) ukuba bafunde izakhono zedijithali kwaye bayisebenzise njengenkunzi yabo ukuze babe yi-digitalpreneur okanye basebenze kuyilo lokuyila. ishishini.
“I-Indonesia inezikolo ezingama-31,385 zokuhlalisa amaSilamsi kwaye siyabakhuthaza bonke ukuba baphuhlise uqoqosho lwabo lobuchule ngokusebenzisa idijithali. Onke la manyathelo ayinxalenye yeenzame zethu zokuqhubela phambili ukukhula koqoqosho lwesizwe,” wongeze watsho uSandiaga.
I-Ofisi yoMphathiswa ikwaqinise intsebenziswano kunye nabo bonke abachaphazelekayo ukuze kuphuculwe ukomelela koshishino olusekwe kwi-“3 C principals”, ezizezi, ukuzibophelela, uBuchule, uBuchule, ukuvuselela ukhenketho noqoqosho loyilo, ukwandisa ukuxhotyiswa kwezoqoqosho, nokudala amathuba engqesho.
“Kufuneka sisebenze ngokubambisana kuwo onke amathuba akhoyo oshishino ukudala imisebenzi emitsha. Ngezimvo ezitsha kunye nezokuyila, singaphinda sakhe kwaye siqhubele phambili uqoqosho lwase-Indonesia, ”uvale ngelo uSandiaga.